Arsenal oo iminkaba isaga hartay loolanka Premier League…(Aqri Tiro-koobkan!!!!!) – Gool FM
(London) 21 Agoosto 2017. Haa, waa sax xilli ciyaareedka cusub ee Premier League waa bilow oo waxaa la soo ciyaaray labo kulan oo qura misane tiro koob la soo saaray waxay sheegayaan in Arsenal aysan ku guuleysan doonin Premier League.
Arsenal ayaa guul ku furatay horyaalka kaddib markii ay 4-3 kaga adkaatay Leicester City waxaana la aaminsanaa inay kulankeeda labaad cagta sii marin doonto Stoke City.
Laakiin wiilasha Wenger ayaa waxay guul darro xanuun badan ku soo gaartay garoonka inkaaran ee bet365 Stadium kaa oo ciddii looga soo adkaada marna aysan ku guuleysan Premier League.
Xiddigii hore ee Real Madrid ee dhawaan ku soo biiray Stoke City Jese Rodriguez ayaa goolka madiga ah ka dhaliyay Gunners.
Arsene Wenger iyo Arsenal ayaa u waqti dheer ilimadu ugu qubaneysay sidii ay mar uun ugu guuleysan lahaayeen Premier League maadaama ay ugu dambeysay 2003-04 kolkaa ay ku guuleysteen horyaalka iyagoon marna laga adkaan.
Yeelkeede, Arsenal ayaa malaha sanad kale u baahan inay sugato sidii ay ugu guuleysan lahayd PL waayo midkan kuma guuleysan karto sida uu sheegayo Tiro koob la soo saaray.
Ma jirto ebid taariikhda Premier League koox ku guuleysatay horyaalka iyadoo kulan away ah guul darro kala soo hoyatay garoonka Stoke ee bet365 Stadium ama Britannia Stadium oo markii hore loogu yeeri jiray.
Garoonka Stoke ayaa ah garoon Inkaaran oo ciddii looga soo adkaado kuma guuleysan horyaalka.
Kooxaha ku guuleystay Premier League sanadihii ay Stoke joogtay. 6 guul ayay ku soo gaareen bet365 Stadium, 3-na bar baro ayay ku soo galeen, mid looga soo adkaadeyna ma jirto.
Haddaba tiro koobkan wuxuu sheegayaa haddii lagaaga soo adkaado garoonka Stoke City waa ka sabar horyaalka Premier League.
Marka laga soo tago midaa Arsenal ayaaba sideeda kale Rikoodh xun ka heysata kooxda lagu naaneyso Potters, 10-kulan ay Premier League kula soo ciyaartay garoonkooda 2 kulan oo qura ayay guul ka gaartay, 3-da jeer bar baro, halka 5 jeer laga adkaaday Gunners.
EEG Tiro koobka, kooxaha ku soo guuleystay Premier League guul amaba bar-baro ayay ka soo qaadanayeen bet365 Stadium.
EEG rikoodhka Stoke City iyo Arsenal:
Abdisamed Mohamed Hassan (Black Yare).
RASMI: Kondogbia oo ku biiray Valencia